Waa kee saxiixa ay Barcelona ka hormarineyso hubinta mustaqbalka Lionel Messi? – Gool FM
(Barcelona) 15 Maajo 2021. Kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa lagu soo warramayaa inay dib u dhiganeyso qorshaha heshiis u kordhinta kabtankeeda Lionel Messi kaasoo marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan bilaash uga tagi kara Camp Nou.
Waxaa dhowaanahan socday wada xaajood u dhexeeya madaxweynaha kooxda Barca ee Joan Laporta iyo Jorge Messi oo ah wakiilka iyo aabbaha dhalay Leo kuwaasoo heshiiska loogu cusbooneysiinayo laacibka reer Argentina.
Hase ahaatee, waxaa haatan wararka Spain ay sheegayaan inay Blaugrana hakad gelineyso xaqiijinta mustaqbalka Messi iyadoo muhiimadda koowaad siineyso saxiixa weeraryahanka Borussia Dortmund ee Erling Braut Haaland.
Wada xaajood hor dhac ah ayaa bilawgii sanadkan dhex maray kooxda Barcelona iyo wakiilka laacibka 20-jirka ah ee Mino Raiolo, balse lacaga BVB dalbaneyso ee ah tiro aan ka yareyn 154 milyan oo gini ayaa caqabad ku ah Barcelona inay dhammeystirto saaxiixa Haaland xagaagan.
Si kastaba ha ahaatee, sida ay The Sun warineyso, kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ayaa diiradda saareysa saxiixa xiddig mustaqbalka hoggaamin kara weerarka kooxda, waxaana Laporta uu qorshaha koowaad ka dhigtay lasoo saxiixashada weeraryahanka reer Norway.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in sababta ay Barca u qaadatay go’aankan ay tahay inay Messi u xaqiijiso in kooxda dhismaheeda la bilaabay sidaas darteed lagu qanciyo in heshiis cusub uu saxiixo maadaama xiddigo muhiim ah lagu so daray safka uu hoggaanka u yahay.
Erling Haaland ayaa xiiso ka helaya qaar ka mid ah kooxaha ugu waaweyn qaaradda Yurub, hase ahaatee, Blaugrana ayaa dhexda u xiratay sidii ay ugu garaaci lahayd kooxaha kula loollamaya saxiixiisa.
Horudhac: Juventus vs Inter Milan… (Bianconeri oo dooneysa inay soo noolleyso rajadeeda usoo bixitaanka UCL xilli ciyaareedka dambe)